i-USSA izodlala ne-Sri Lanka kwi-final ye-Emerging Series
Kabelo Sekhukhune of SA USSA
i-University Sports South Africa (USSA) izodlala ne-Sri Lanka Emerging kwi-final ye-One-Day Triangular Series ngeSonto emuva kokukhipha i-South Africa Emerging ngezinti ezinhlanu kumdlalo wokugcina wokukhiphana we-round-robin ePitoli ngoLwesine.
u-Kabelo Sekhukhune othole u-66 (96 balls, 9 fours) udlale indima ebalulekile kumphumela emuva kokusiza athwale iqembu lakhe ukuze linqobe ngokufika ku-182 kusele ama-overs adlulile ku-15.
Kube ukunqoba kwesithathu kweqembu la-Kruger van Wyk futhi kusho ukuthi bakhiphe iqembu ebelithandiwe le-SA kumdlalo ozocacisa. Ovula umdlalo u-Sekhukhune akagqamanga yedwa, abashwibayo, beholwa u-Gideon Peters (3/45), udlale indima ebalulekile ngokukhipha abadlale nabo ngama-runs awu-181 kuma-overs awu-34.1.
i-USSA ibinqobe i-toss futhi yakhetha ukushwiba kuqala, kodwa isinqumo asibukekanga kahle ekuqaleni emuva kokuthi i-SA Emerging iqale kahle. Beholwa othole ama-runs amaningi kubona u-Janneman Malan, oshaye u-68 emabholeni awu-63 ehlasela (9 fours, 2 sixes), futhi u-Tony de Zorzi (15), iqembu la-Shukri Conrad lifike ku-62 kuphume oyedwa kwi-overs yesi-10 bese kwaba u-111 kuphume ababili nge-over yesi-20 ngenxa ka-Raynard van Tonder othole u-26.
Kodwa kwabheda kusukela lapho, bafika ku-147 kuphume abathathu nge-over yesi-28 kumphumela wabo wokugcina – ukuphuma kwezinti eziyisikhombisa ngama-runs awu-34. u-Peters uhlasele kakhulu ngokukhipha izinti, kwathi u-Shabir Mallie wakhipha ababili ngama-runs ayisishagalolunye.
Bephendula kahle, i-man-of-the-match u-Sekhukhune wehlise umoya wabeka iqembu lakhe ku-101 kuphume oyedwa bese kwaba u-162 kuphume ababili kulandela izinhlanganiso zama-runs awu-65 no-Neil Brand (43) ngenti yesibili futhi nenhlanganiso yama-runs awu-61 no-Rubin Hermann (27) ngenti yesithathu.
Lokho kubasondezile, ngaphambi kokuhlasela ngasekugcineni kwa-Marco Jansen (2/39), kodwa kufike sekuhambe isikhathi ukwenza umehluko kumphumela njengoba i-USSA inqobe kusele amabhola awu-94.
Sun 14: Final-USSA vs Sri Lanka Emerging (Tuks Oval)
Thu 18-Sun 21: 1st Four Day Match-South Africa Emerging vs Sri Lanka Emerging (Senwes Park)
Thu 25-Sun 28: 2nd Four Day Match-South Africa Emerging vs Sri Lanka Emerging (Tuks Oval)
Abanelanga ubuqhawe kwa-Jansen ukunqobisa i-SA Emerging i-All-rounder u-Simmonds usize i-SA Emerging inqobe okokuqala idlala ne-Sri Lanka i-Pakistan ingaphambili kwi-series idlala ne-SA U19s Ukukholelwa endleleni okwenziwa ngayo, kusho u-Mahatlane i-Pakistan ingaphambili ngo-3-0 nokho u-Terblanche ethole ikhulu kwi-Youth ODI yesithathu u-Louw ufuna ama-SA U19s agxile kumoya weqembu kanye nezenzo kumdlalo wesithathu we-Youth ODI u-Khan no-Nazir beshaya babeka i-Pakistan ngaphambili ngo-2-0 kwi-Youth ODI series i-CSA imemezele imidlalo ye-SA U19s ngaphambi kwe-World Cup bedlala ne-India, i-Zimbabwe ne-New Zealand uParsons uzimisele ngokuhola njengesibonelo kuhambo lasekhaya bedlala ne-Pakistan i-CSA iluvumile uhambo lasekhaya ne-Pakistan, baqamba neqembu u-Mahatlane ugculisekile ngokufundiwe kuhambo lase-India